Guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya oo sheegay in dhawaan la daabici doono lacag adag oo rasmi ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeBusinessGuddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya oo sheegay in dhawaan la daabici doono lacag adag oo rasmi ah
February 12, 2017 Abdi Omar Bile Business, Somalia 0
Guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya oo sheegay in dhawaan la daabici doono lacag adag oo rasmi ah. [Xigashada Sawirka: Reuters]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa qorsheynaysa daabacaada lacago adag oo rasmi ah inta lagu guda jiro sanadkan markii ugu horeysay tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe 1991-dii.
Guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Bashiir Ciise Cali oo wareysi gaar ah siiyay idaacada VOA-da shalay oo Sabti ahayd waxa uu sheegay in dhammaan howlihii farsamo ee diyaarinta la dhammeeyay, ayna dowladdu ku kalsoontahay in ay awoodu uruurinta lacagaha muddo saddex bilood ah si loo fuliyo barnaamijka daabacaada. Shaqada dheeriga ahna ay qaadan doonto afar bilood oo kale.
Mar la weydiiyay haddii Sooomaaliya ay daabacayso ayna uruurinayso lacagaha inta lagu guda jiro sanadkan 2017-ka, Bashiir ayaa ku jawaabay: “Haa dhab ahaantii.” Waxa uu balanqaaday in lacagta cusub ee adag ay ahaan doonto mid wanaagsan oo lagu kalsoonaan karo ammaankeeda.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in haayado caalami ah sida Bangiga Aduunka iyo haayada caalamiga ah ee maaliyada IMF, iyo sidoo kale Khasnada Mareykanka, ay ka caawin doonaan Soomaaliya dib u habaynta nidamkeeda maaliyadeed ayna tababari doonaan shaqaalaha bangiga dhexe.
Bashiir ayaa sheegay in dowladda ay u baahantahay $60 milyan si loo bilaabo daabacaada lacagta, waxaana uu sheegay in qayb kamid ah lacagtaas ay ka fili doonaan in ay ka caawiyaan deeq bixiyeyaasha caalamiga ah.
Intii lagu guda jiray burburka Soomaaliya ayaan lahayn lacag rasmi ah iyadoo suuqa ay ku jirto lacago aan rasmi ahayn oo aysan dowladda dhexe daabicin.
May 5, 2017 Diyaaradii ugu horeysay ee rakaab oo Shiinuhu sameystay oo hawada gashay
January 3, 2017 Warshada ugu weyn Soomaaliya ee soo-saarta biyaha la cabo ee caagadaha oo laga furay Gaalkacyo
Waqooyiga Kuuriya oo tijaabisay gantaal rido dheer
Bosaso-(Puntland Mirror) An accountant from business center in Bosaso has been shot dead, local sources said. Ahmed Ali Dalaq who was accountant for Sabir business center was assassinated by unidentified gunmen with pistols in Bosaso [...]